Aza mampme… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fa ny nanaitra aloha dia ity e. Misy ireo mpanao gazety no mahitahita. Mahita biby alohan’ny volana handray azafady fa mivadika mahita volana alohan’ny biby (ireo mpikabary moa dia milaza fa mahita volana alohan’ny Habib no fiteny, Habib izany dia mpanandro nalaza fahiny). Misy, hoy aho, ireo mpanao gazety nahalala talohan’ny fotoana fa ny zoma no hivoaka ny didim-pitsarana na dia tsy misy aza ny fe-potoana voafaritra ny didy amam-pitsipika manery ny FAL hamoaka ny didiny amin’io zoma io (12 jiona). Tsisy fe-potoana notondroin’ny lalàna hamoahana ny didim-pitsarana.
Ny manaitra faharoa dia ity. Ny zoma maraina ny mpikambana ao amin’ny FAL no nivory mangina (audience privée no ilazany azy amin’ny fiteny vahiny). Tsy mba misy dikan-teny amin’ny fiteny malagasy koa amin’ny tranonkalan’ity FAL ity. Na faly ianao na tsy faly dia ny rijan-teny rehetra dia amin’ny fiteny frantsay ihany. Ny zoma maraina no nivory ireo mpikambana ao amin’ny FAL ary dia ny sabotsy 13 jiona no navoaka tao amin’ny tranonkala io asabotsy maraina io koa no napetraka peta-drindrina tao amin’ny foiben’ny FAL na HCC ireo didim-pitsarana. Manaitra izany fomba fiasa izany satria andro tsy fiasana ny andro asabotsy. Ka inona no nanaovana ny fitsarana andro zoma ? Misy nahamaika ve ? Rehefa jerena ny kalandrie na tetiandro dia tsy hita loatra izay nahatery ny FAL hamoaka ny didim-pitsarana io asabotsy io. Raha ny feo mihely aloha dia maika handeha any ivelan’i Madagasikara ny sasany tamin’ireo mpitsara ao anatin’ny FAL. Hitsangatsangana fa nahazo saosy hoy ny mpanatsatso. Nitsoaka hoy ny mpanaratsy. Hivory hoy ny hafa. Tsy eo ry zareo ka tsy fantatra izay marina.
Fa misy ifandraisan’ny famoahana didim-pitsarana sy ny “fisavana” ny fiara nentin’ilay depiote Mapar ve ? Tsiahivina fa nahitana vola kely mitentina 200 tapitrisa ariary tao anatina baoritra roa io fiara io. Tsy mba misy kisendrasendra izany mantsy eo amin’ireo mpanao politika ireo.
Raha miteny izany dia toa milaza fa manao politika ny FAL. “Aza mampme” hoy ny fiteny tanora. Aza mampme tsy manao politika izany ny mpikambana ao amin’ny FAL. Angamba. Tsy avelan’ny lalàna hanao politika tokoa ireo mpikambana ao amin’ny FAL, tsy izy ireo ihany fa ny mpitsara rehetra e. Fa na tsy avelan’ny lalàna hanao politika izy ireo dia resaka politika no asaina tsarain’izy ireo. Mpanao politika no nasaina notsarainy raha ity fanonganana ity no resahina. Na inona didy navoakan’ny FAL teo dia misy fiantraikany eo amin’ny tontolo politika eto Madagasikara izany. Didy politika ve raha izany ? Mazava loatra fa didy politika… Manamafy ny safidin’ny vahoaka tamin’ny fihodinana faharoa ny tsy fanalana ny Filoham-pirenena amin’ny asany. Mandrava ny safidin’ny vahoaka kosa raha nankato ny fitorian’ny depiote ireo mpikambana ao amin’ny FAL. Politika izany.
Mampme, inona koa izany?
Mampme, tahaka izao no fanoratra azy amin’ireo tambozotran-tserasera. Manova fitsipika mihitsy aloha raha io tambazotra io e. Mampihomehy no tiana hambara amin’io mampme io. Avy hatrany dia fantatrao mpamaky ilay izy, fa aza mody fanina eo ianao.
Indrisy, tsy mampihomehy ny fizotry ny tantaram-pirenena. Any ambony any anie ka raikitra ny ady varotra e. Tsy mahazo maneho ny heviny izany ireo depiote fa mbola raikitra ny ady varotra. Efa miroso amin’ilay pacte de responsabilité ry zareo any. Tahaka izao no dinika ambony latabatra :
- Manaiky mora foana io didy io ireo mpanao politika ary atsahatra ny fanenjehana an’ilay depiote vehivavy… honohono izany an fa zaraina etoana ihany
- Tsy ravana ny Antenimieram-pirenena fa manaiky hametra-pialana ireo birao maharitra (satria mpitari-tolona resy izy ireo ka miala no mety aminy), dia efa miroso amin’ny kajikajy ny ao Tsimbazaza ao ;
- Ho ravana ny Antenimieram-pirenena ary dia hatao miaraka ny fifidianana depiote sy ny ben’ny tanàna ary mpanolotsaina (hevitra mpiteraka eo ambony latabatra izany).
Tsy mampiomehy intsony ny fizotry ny tantara rehefa mandre ireo mpanao politika midinika. Miezaka miala amin’ny toerana mahazatra fivorian’izy ireo depiote sy mpanao politika fa misy hatrany resaka mipitika (tiana ho voizina izy ireny rehefa mipitika tahaka izany fa aza mampihomehy eo, tiana ho fantatra ny onjany raha tonga eny amin’ny vahoaka).
Raha mba izao mantsy no misy olon-kendry azo hapetraka eo amin’ny fitondrana… Aza manonofy e… Mbola tsy tazana eto Madagasikara izany olon-kendry izany mainka moa fa ny olona manam-panahy.